सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागू भइसक्यो: रजिस्टार पाण्डे – Bikash Khabar
सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागू भइसक्यो: रजिस्टार पाण्डे
बुधबार, ०७ आश्विन २०७७ गते १७:४८ मा प्रकाशित	Author विकास खबर	Comment(0)	294 Views
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नभएको प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।
सहकारी संस्थाहरुले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नएको गुनासो गरेपछि उनले प्रमाण लिएर आए कारबाही गर्ने बताएका हुन्। ‘कार्यान्वय नभएको भन्नेहरुले प्रमाण लिएर आउनुस्,’ उनले भने। उनले तथ्य र प्रमाणको आधारमामात्रै बोल्न सबैलाई आग्रह गरे।
डा. पाण्डेले अबको दिनमा अनुगमनका लागि विभागले मेकानिज्म बनाएको र छिट्टै निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने बताए। ‘यो ब्याजदर अब लागू भएरै छाड्छ। अनुगमनलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर विषयमा आयोजना गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै डा. पाण्डेले यसअघि १६ प्रतिशत ब्याजदर कार्यान्वयन भएको र अहिलेको १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर पनि कार्यान्वयन हुने बताए।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा भावनामा बगेर नभइ अध्ययन गरेर ल्याएको उनको दाबी थियो। कार्यक्रममा उनले सहकारी संस्थाहरुले सेवाशुल्क बढी लिने गरेको गुनासो बढेको भन्दै अब केही समयमै विभागले सेवा शुल्कतोक्ने जानकारी दिए।
युनाइटेड फाइनान्स नविल बैंकमा गाभिने
काठमाडौँ, १७ बैशाख । नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई एक्विजेशन ९प्राप्ती० गर्नका लागि शुक्रबार नबिल बैंक र युनाइटेड फाइनान्सबीच सम्झौता भएको
२४ भदौ,काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)का उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालको चारदिने भ्रमणमा आज बिहान काठमाडौँ आइपुग्नुभयो
काठमाडौं,१९ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले देश विकासमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको
अब कृषिकर्म गर्नेहरू निराश हुनु पर्दैन: कृषिमन्त्री भुसाल